Isakhiwo somlando esinokubukwa kwehlathi okuhle kakhulu
Crowea, Western Australia, i-Australia
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Annie
Phakathi kweNorthcliffe nePemberton, iSingle Kiln iyingxenye yeqembu lamakotishi ama-4: Karri Hill Cottages. Ekuqaleni wawuklanyelwe ukomisa ugwayi futhi ungakwazi ukuvula iziphephelo zokungenisa umoya ophahleni ngezinsuku ezishisayo, ezilungele ukukugcina upholile. Inokubukwa okuhle kuwo wonke ama-paddocks ukuya ehlathini le-karri ngaphesheya. Inekhishi elihlome kahle elinesitofu segesi nohhavini kanjalo nemicrowave. Umlilo wezinkuni uzokugcina ufudumele ngobusuku obubandayo.
Uzothola lokhu kuyindawo ekahle yokuza uphumule futhi ujabulele ukuthula nokuthula kwepulazi, elizungezwe izihlahla ze-karri ezinamandla. Ama-wrens amahle aluhlaza aqinisekile ukukunikeza umbukiso, kanye nazo zonke ezinye izinyoni ezifika zivakashele. Sitholakala empambanweni yomzila we-bibulmun kanye nethrekhi yamabhayisikili ye-munda biddi. Ungakwazi ukuhamba ehlathini noma uzungeze ipulazi, nechibi lalo namachibi amaningi. Siphinde sibe namabhayisikili amasekeni ambalwa ongawaboleka ukuze uwagibele.
4.83(36 okushiwo abanye)
INorthcliffe iqhele ngamakhilomitha ayi-7 futhi ukuya ePemberton, ungahamba ngemigwaqo engavaliwe, udlule ngaseCascade Waterfalls, noma udlule eNorthcliffe emigwaqweni evaliwe.
Sihlala emngceleni oseningizimu waleli pulazi elingamahektha ayi-100, kuTobacco Rd. Sifike sisebenze engadini nasengadini yezithelo sihlole nezilwane. Sizoshiya isaziso emnyango, ukuze wazi ukuthi iyiphi iBell cottage futhi uma sikubona ufika, sizofika sizobingelela. Sivamise ukuba namaqanda engeziwe aphuma ezinkukhuni zethu zamahhala futhi sabelane ngazo nezivakashi zethu. Ngakho-ke, uzokwazi ukudla ukudla okusha! Ngokubuyisela, sithanda ukucela ukuthi uhlukanise umquba kwenye imfucumfucu, ngakho ungasetshenziswa yizinkukhu noma izikelemu zokuvundisa. Sicela futhi ugcine amabhodlela nezinto ezigaywa kabusha zihlukene.
Silindele ukuthi uzoshiya ikotishi lisesimweni esihlanzekile futhi izingubo zokulala zisusiwe emibhedeni oyisebenzisile. Sikunikeza imicamelo eyengeziwe, sicela ususe imicamelo emicamelo oyisebenzisile.
Sihlala emngceleni oseningizimu waleli pulazi elingamahektha ayi-100, kuTobacco Rd. Sifike sisebenze engadini nasengadini yezithelo sihlole nezilwane. Sizoshiya isaziso emnyango, u…
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-R5636.
Hlola ezinye izinketho ezise- Crowea namaphethelo